Ihe mgbochi mmiri: Gịnị bụ ihe kachasị mma maka ịmepụta asụsụ?
Nchịkọta weebụ, nke a makwaara dị ka nbudata data na nchịkọta weebụ, bụ ụzọ nke iwepụta data sitere na saịtị dị iche. Ngwá ọrụ ntanetị weebụ na-enweta ịntanetị ma ọ bụ site na ihe nchọgharị weebụ ma ọ bụ site na Protocol Transfer Protocol. A na-ejikarị emepụta weebụ na-emejuputa ya site n'enyemaka nke bọtịnụ ndị na-akpaghị aka ma ọ bụ ndị ntanetị weebụ. Ha na-ebugharị site na ibe weebụ dị iche iche, na-anakọta data ma wepụ ya dịka ihe ndị ọkachamara chọrọ. Ejiri ọdịnaya nke ibe weebụ, gbanwee ma chọọ, ebe a na-edegharị data ahụ na teepu mgbe a haziri ya n'ụzọ zuru ezu dịka ntụziaka.
A na-ewuputa ibe weebụ na ederede ederede ederede dịka HTML, Eke Ọgba, na XHTML. Ọ nwere akụ na ụba nke ọmụma ma kee ya maka mmadụ, ọ bụghị maka bọọlụ weebụ bots. Otú ọ dị, ngwaọrụ dị iche iche nwere ike ịgụta peeji ndị dịka ụmụ mmadụ ma nweta ozi bara uru na CSV ma ọ bụ JSON formats.
Ọ bụ Eke Ọgba kacha mma weebụ?
Eke Ọgba bụ asụsụ mmemme nke na-enye "shea" iji wepụ data na ụdị nke ederede. Ọ na-enyere ndị ọrụ aka inweta ozi sitere na ibe weebụ. Eke na-aba uru mgbe ndị ahịa ma ọ bụ ndị na-eme ihe nkiri dijitalụ kpebiri iji aka ha wepụ data. Na asụsụ a, anyị nwere ike ịbanye ntinye koodu ma hụ otú e si ewepụ data. Otú ọ dị, Python abụghị asụsụ kacha mma weebụ.
Eke Ọgba nwere ọtụtụ narị nhọrọ bara uru iji chekwaa oge anyị. Dị ka ọmụmaatụ, ọ bụ ama n'etiti ndị ọkachamara mmụta sayensị na ndị nchọpụta data. Eke Ọ na-eme ka ọ dịrị anyị mfe ịchọta data bara uru na akwụkwọ agụmakwụkwọ n'Ịntanet. Ma mgbe ọ na-abịa web scraping, Python adịghị dị ka irè dị ka C ++ na PHP. Eke maara Eke Ọgba maka nkwado ya ma chekwaa data na usoro ndị dị ka JSON na CSV.
Asụsụ mmemme kachasị mma maka ntanetị weebụ:
O doro anya na Python abụghị asụsụ kachasị maka nchịkọta weebụ.Kama nke ahụ, ọtụtụ ndị mmemme na ndị ọkà mmụta sayensị na-ahọrọ C ++, Node. js, na PHP n'elu Python.
Ọ dị mma n'iwepụ ma na-agba ebe dị iche iche. Node. js kwesịrị ekwesị maka ebe nrụọrụ weebụ dị ike ma na-akwado nkesa na-ekesa n'elu ịntanetị. Asụsụ a bara uru maka nyocha data ma site na weebụsaịtị.
C ++ na-enye akwa arụmọrụ ma na-efu ya.Asụsụ a dị mma karịa Eke Ọgba ma hụ na ọ ga - arụpụta ezigbo nsonaazụ. Otú ọ dị, a gaghị atụ aro ka ụlọ ọrụ dị na ya n'ihi koodu mgbagwoju anya ya.
PHP bụ asụsụ kachasị maka nchịkọta weebụ. N'adịghị ka Eke Ọgba na C +, PHP adịghị emepụta nsogbu ka ị na-eme atụmatụ ihe omume na ịchọta ọdịnaya sitere na weebụsaịtị dị iche iche. Ọ dị ka ihe niile na-ejikarị arụ ọrụ weebụ na ntanetị ihe ntanetị na ịntanetị. Bubata. io na Kimono Labs bụ ngwá ọrụ ntinye ike nke abụọ dabere na PHP. Ha nwere nnukwu atụmatụ ma nwee ike ibelata ọtụtụ ibe weebụ n'otu awa ma ọ bụ abụọ. O di nwute, Mma ogwu na nlekota (nke dabeere na Python) adighi enye nkwado dika PHP sitere na ihe ndi ozo.
Ugbu a, o doro anya na asụsụ niile mmemme nwere uru ha na ụkọ ha. PHP, Otú ọ dị, dị mma karịa Python na ọ bụ asụsụ ntanetị kacha mma. Ọ na-enye ndị ọrụ ọrụ dị mma ma nwee ike ijikwa nnukwu nnukwu ọrụ ngwa ngwa Source .